စဖင့်ရုပ်တု နှင့် ဂန္ဓာရီပညာ - Thutazone
စဖင့်ရုပ်တု နှင့် ဂန္ဓာရီပညာ
By ThutammPosted on March 10, 2018 March 21, 2018
ရေးသားသူ – လင်းညို့တာရာ
စဖင့် (Sphinx) ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “လည်မြို ကို ညှစ်သူ” ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂရိအမည်ဖြစ်ပြီး ငှက်တကောင်ရဲ့ တောင်ပံတစ်စုံရယ်၊ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရယ် ၊ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဦးခေါင်းတစ်လုံးရယ် တွဲစပ်ထုဆစ်ထားတဲ့ သတ္တ၀ါကို ခေါ်ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဂျစ်မှာ စဖင့်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်း တန်ဆာပလာတွေ ဆင်ယင်ထားတာကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ God Amun နတ်ရုပ်နဲ့သိုးထီးတစ်ကောင်ရဲ့ဦးခေါင်းတစ်လုံး တွဲစပ်ထုဆစ်ထားတာမျိုးလဲ ရှိပါတယ်။
ခါဖရီဗယ်လီတောင်ကြား ဘုရားကျောင်းအနီးက ဧရာမ စဖင့်ကြီးဟာ ခါဖရီ ဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့ မျက်နှာနဲ့တပုံစံတည်း ထုဆစ်ထားတာလို့ ဆိုကြတာမို့ ထုဆစ်သူ ပညာရှင်ရဲ့ အရည်အချင်းကို ချီးကျူးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကူဖူးဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့ မျက်နှာတော်လို့လည်း အငြင်းပွားမှု ရှိနေပါတယ်။
အီဂျစ်လက်ရာတွေထဲမှာ A New Kingdom Temple နှင့် Khafre’s Valley Temple တို့ဟာ အထူး ရေပန်းစားတဲ့ လက်ရာများပါပဲ။ ဒီဘုရားကျောင်းက စဖင့်ကြီး ၄ ကောင်ဟာ တစ်ကောင်ကို ၂၆ ပေ ကျော်ပါတယ်။ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များ အလိုအရ ဒီရုပ်တု အောက်ခြေအထိုင် ထုံးကျောက်ပြားကို ထောင့်မှန်စတုဂံ ကျောက်တုံးတစ်ခုတည်း သုံးပြီး U ပုံ ကတုတ်ကျင်း နက်နက်တူးကာ အောက်ခံ block တုံးကို မြေချခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စဖင့်ကြီးကို ထင်သာမြင်သာအောင် ကုန်းကမူ အမြင့်မှာ ခန့်ညားထယ်ဝါစွာ သွန်းထုထားတာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်း ၅၀ အာဖရိက Eocene အလယ်ခေတ် က အရှေ့မြောက်ဘက် ပင်လယ်ရေအောက် ၀ဲဖလုပ်ထဲက နစ်မြုပ်ကပ်ညိနေတဲ့အနယ် အနှစ် အမှုန်တွေကို ဆယ်ယူစုပေါင်း သွန်းထုပြုလုပ်ထားတာမျိုး ဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်များက လေ့လာ သိရှိခဲ့ပါတယ်။ ရေပျော်သတ္တ၀ါများ အသက်ဇီဝိန်ချုပ်ငြိမ်း ပျောက်ကွယ်သွားရာမှာ ကြွင်းကျန်တဲ့ရုပ်ကလာပ်တွေက မာကျောတဲ့ ကျောက်ချပ်လွှာများအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ အဲဒီလို ဇီဝရုပ်ကြွင်းမှတဆင့် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ၊ ရွှံ့နွံများ ခြောက်သွေ့ မာကျောရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျောက်ချပ်လွှာများ၊ သဲသောင်ရေတိမ်မျိုးမှာ ပေါက်ပွားတတ်တဲ့သန္တာကျောက်တန်း သောင်ခုံများဟာ အီဂျစ်ပန်းပု ပညာရှင်များအဖို့အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများပါပဲ။ ထုံးကျေက်များနဲ့သာမက ကျောက်ဖြူသားနဲ့ပါ ထွင်းထုထားတာမျိုးတွေလည်း အများအပြား ရှိပါသေးတယ်။
စဖင့်တွေရဲ့မျက်နှာဟာ ထွန်းသစ်စ ရှင်နေမင်းရဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေနဲ့ပြည့်လျှံနေကြောင်း လင်္ကာဆရာများက ဖွဲ့ နွဲ့ ကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ခြင်္သေ့ ဆိုတာက အထူးပြောဖို့ မလိုပါ။ ရဲရင့်ထက်မြက်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းထွန်းတောက်ခြင်း လို့အီဂျစ်တွေက အဓိပ္မါယ် ဖွင့်ဆိုယူဆခဲ့ပါတယ်။ ခြင်္သေ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်က တော်ဝင်လူသားတယောက်ရဲ့ ဦးခေါင်းဟာ တန်ခိုးအာဏာ သက်ရောက်ခြင်း ၊ ခွန်အားကြီးခြင်း၊ ဉာဏ်ရည်မြင့်မားခြင်း စတဲ့စွမ်းရည်များနဲ့ပြည့်ဝသူ ဖာရိုးဘုရင်လို့ရည်ညွှန်းထားတာပါ။ ဒါဟာ ရှေးနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်က အီဂျစ်လူမျိုးတို့ ရဲ့Icon ကိုးကွယ်မှုပုံစံ တစ်မျိုးပါပဲ။ အီဂျစ်ခေတ်ဟောင်းနိုင်ငံ တစ်ခုရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
အီဂျစ်မှာ ပိရမစ်များနဲ့ ခွဲခြားလို့မရအောင် တပူးပူး တတွဲတွဲ ဖြစ်နေတဲ့ အရာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ စဖင့်ရုပ်ထုများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စဖင့်သည် လူ့မျက်နှာပုံ ဖြစ်သည့်အပြင် ကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးပေါ်တွင် ထွင်းထုထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီး ပိရမစ်များနှင့်လည်း ယှဉ်တွဲလျက် ရှိပါတယ်။ စဖင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အထားကတော့ ရှားပါးလှပါတယ်။ အီဂျစ်ဘုရင်မင်းဆက် ၁၈ ကြိမ်မြောက် မင်းဆက် နောက်ပိုင်းမှသာ စဖင့်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်တမ်းများ ရှိခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အကြီးဆုံးသော စဖင့်ရုပ်ထုကြီးမှာ သဲထဲတွင် နစ်မြုပ်နေရာမှ ပြန်လည်တူးဖော်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စဖင့်တွေဟာ ပိရမစ်များ၊ ဘုရားကျောင်းအနီးများမှာ အစောင့်အရှောက်အဖြစ် ထားတဲ့သဘောမျိုး ဆောင်နေပါတယ်။ ဂီဇာအရပ်မှာရှိတဲ့ စဖင့်ရုပ်တုကြီးဟာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး လေးထပ်တိုက်ခန့် အမြင့်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျောင်းကန် ဘုရားများမှာ အစောင့်အရှောက်အဖြစ် ခြင်္သေ့ရုပ်များ ထားသလို စဖင့်ဆိုတာလည်း အီဂျစ်တွေရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ အဆောက်အဦးများအတွက် အစောင့်အရှောက်များ ဖြစ်တန်ရာပါတယ်။
စဖင့်ရုပ်ထုများကို နေထွက်ရာ အရှေ့ဘက်ကို မျက်နှာမူ တည်ဆောက်ထားကြပါတယ်။ စဖင့်ဆိုတာ အီဂျစ်ရဲ့ ဈာန်နတ်ဘုရားကို ရည်ညွှန်းပြီး အထွတ်အမြတ်နေရာများနဲ့ ဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာ အတတ်ပညာများကို စောင့်ရှောက်ပေးနေခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စဖင့်တွေကို မူလထွင်းထုစဉ်က အချိုးကျန လှပပြီး ကျက်သရေရှိသော မျက်နှာများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သဘာဝမုန်တိုင်းများနဲ့ လက်ဆော့သူတချို့ကြောင့် အချို့စဖင့်တွေရဲ့ နှာခေါင်းနှင့် မျက်နှာတွေ ပျက်စီးသွားကြရပါတယ်။
စဖင့်ရဲ့မျက်နှာတွေထဲမှာ ဂီဇာအရပ်မှာရှိတဲ့ စဖင့်ရုပ်ထုကြီးဟာ အလွန်တည်ကြည် ခံ့ငြားပြီး အရှေ့အရပ်က ပေါ်ထွန်းလာမယ့် နေဘုရားကို ပူဇော်နေဟန် ရှိပါတယ်။ စာရေးဆရာကြီး ပေါလ်ဘရင်တန်ကတော့ ရှေးဟောင်းအီဂျစ်လူမျိုးများသည် ရား ခေါ် နေနတ်ဘုရားကို ကိုးကွယ်ကြရာ စဖင့်ရုပ်ထုများကို နေဘုရားအား ပူဇော်ဖို့ရန် အရှေ့ဘက်သို့ လှည့်ထားခြင်းမှာ ပနံသင့်လှကြောင်း မှတ်ချက်ချထားပါတယ်။
အရှေ့နိုင်ငံမှ ဆင်းသက်လာသော အာရတ်တွေဟာ ကော့ကေးရှပ်တောင်တန်း မှတစ်ဆင့် အီဂျစ်ပြည်ကို ဘီစီ ၁၀,၀၀၀ ခန့်မှာ ဝင်ရောက်လာပြီး ဂီဇာအရပ်ကို ဗဟိုပြု ထီးနန်းစိုက်ပါတယ်။ အာရ်ယာန်နွယ်များ ဝင်လာခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အာရတ်တွေနဲ့အတူ အာရ်ယာန်သာသာနာပြု ဘုန်းတော်ကြီးများလည်း ပါလာပြီး ဘာသာရေးအယူ တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းဘာသာရဲ့အနှစ်သာရအရ အရာရာကို ဖန်တီးနိုင်တဲ့ အန္တိမ ဓာတ်ဘုရားကြီး ရှိပါတယ်။ ထိုဓာတ်ဘုရားက ဖန်တီးပေးအပ်တဲ့ အသက်ဓာတ်က လောကလူသားများအဖြစ် တည်ရှိပြီး ရုပ်ခန္ဓာသေဆုံးပေမယ့် အသက်ဓာတ်ကတော့ ဆက်လက်ကျန်ရစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာရတ်ဘုရင်မှာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မင်းဆရာလည်းဖြစ်ပြီး အရှေ့အရပ်မှလာတဲ့ အာရ်ယာန်အနွယ် တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရင်ကြီး အနီးမှာရှိတဲ့ မှူးမတ်ပညာရှိများ အားလုံးထက် ဉာဏ်ပညာ ကြီးမားထူးချွန်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရင်အာရတ် လက်ထက်မှာ စဖင့်များကို စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်တာကြောင့် စဖင့်ရုပ်ထုမျက်နှာသည် ဘုရင်အာရတ်ရဲ့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ မျက်နှာဖြစ်ကြောင်း အတတ်ဟော ဂန္ဓာရီပညာရှင်ဖြစ်သော အဂ္ဂါကေစီက ဆိုပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ။ စဖင့်ရုပ်ထုတွေဆိုတာ ပိရမစ်ဘုရားကျောင်းတွေကိုသာမက ဂန္ဓာရီပညာတိုင်ကြီးကိုပါ စောင့်ရှောက်ကာ ခွန်အားနှင့် စွမ်းအင်ထူးများကို ကိုယ်စားပြုနေကြောင်း သုတေသီများက လက်ခံထားကြပါတယ်။
(1) Egyptian Book of Dead
(2) The Great Initiate
(3) Kallich, Martin. “Oedipus and the Sphinx.” Oedipus: Myth and Drama. N.p.: Western, 1968. N. pag. Print.
စဖငျ့ရုပျတု နှငျ့ ဂန်ဓာရီပညာ (unicode)
ရေးသားသူ – လငျးညို့တာရာ
စဖငျ့ (Sphinx) ရဲ့ အဓိပ်ပါယျကတော့ “လညျမွို ကို ညှဈသူ” ဖွဈပါတယျ ။ ဂရိအမညျဖွဈပွီး ငှကျတကောငျရဲ့ တောငျပံတဈစုံရယျ၊ ခွင်ျသတေ့ဈကောငျရဲ့ ခန်ဓာကိုယျရယျ ၊ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ ဦးခေါငျးတဈလုံးရယျ တှဲစပျထုဆဈထားတဲ့ သတ်တဝါကို ချေါဆိုတာ ဖွဈပါတယျ။ အီဂဈြမှာ စဖငျ့တှေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ ခေါငျးဆောငျး တနျဆာပလာတှေ ဆငျယငျထားတာကိုလညျး မွငျတှနေို့ငျပါတယျ။ God Amun နတျရုပျနဲ့ သိုးထီးတဈကောငျရဲ့ ဦးခေါငျးတဈလုံး တှဲစပျထုဆဈထားတာမြိုးလဲ ရှိပါတယျ။
ခါဖရီဗယျလီတောငျကွား ဘုရားကြောငျးအနီးက ဧရာမ စဖငျ့ကွီးဟာ ခါဖရီ ဘုရငျမငျးမွတျရဲ့ မကျြနှာနဲ့ တပုံစံတညျး ထုဆဈထားတာလို့ ဆိုကွတာမို့ ထုဆဈသူ ပညာရှငျရဲ့ အရညျအခငျြးကို ခြီးကြူးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ကူဖူးဘုရငျမငျးမွတျရဲ့ မကျြနှာတျောလို့လညျး အငွငျးပှားမှု ရှိနပေါတယျ။
အီဂဈြလကျရာတှထေဲမှာ A New Kingdom Temple နှငျ့ Khafre’s Valley Temple တို့ဟာ အထူး ရပေနျးစားတဲ့ လကျရာမြားပါပဲ။ ဒီဘုရားကြောငျးက စဖငျ့ကွီး ၄ ကောငျဟာ တဈကောငျကို ၂၆ ပေ ကြျောပါတယျ။ ဘူမိဗဒေပညာရှငျမြား အလိုအရ ဒီရုပျတု အောကျခွအေထိုငျ ထုံးကြောကျပွားကို ထောငျ့မှနျစတုဂံ ကြောကျတုံးတဈခုတညျး သုံးပွီး U ပုံ ကတုတျကငျြး နကျနကျတူးကာ အောကျခံ block တုံးကို မွခေခြဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။ စဖငျ့ကွီးကို ထငျသာမွငျသာအောငျ ကုနျးကမူ အမွငျ့မှာ ခနျ့ညားထယျဝါစှာ သှနျးထုထားတာပါ။
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈသနျးပေါငျး ၅၀ အာဖရိက Eocene အလယျခတျေ က အရှမွေ့ောကျဘကျ ပငျလယျရအေောကျ ဝဲဖလုပျထဲက နဈမွုပျကပျညိနတေဲ့ အနယျ အနှဈ အမှုနျတှကေို ဆယျယူစုပေါငျး သှနျးထုပွုလုပျထားတာမြိုး ဖွဈကွောငျး ပညာရှငျမြားက လလေ့ာ သိရှိခဲ့ပါတယျ။ ရပြေျောသတ်တဝါမြား အသကျဇီဝိနျခြုပျငွိမျး ပြောကျကှယျသှားရာမှာ ကွှငျးကနျြတဲ့ ရုပျကလာပျတှကေ မာကြောတဲ့ ကြောကျခပျြလှာမြားအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။ အဲဒီလို ဇီဝရုပျကွှငျးမှတဆငျ့ ကြောကျဖွဈရုပျကွှငျးမြား၊ ရှံ့နှံမြား ခွောကျသှမေ့ာကြောရာမှ ဖွဈပျေါလာတဲ့ ကြောကျခပျြလှာမြား၊ သဲသောငျရတေိမျမြိုးမှာ ပေါကျပှားတတျတဲ့ သန်တာကြောကျတနျး သောငျခုံမြားဟာ အီဂဈြပနျးပု ပညာရှငျမြားအဖို့ အကွိုကျတှစေ့မေယျ့ ကုနျကွမျးပစ်စညျးမြားပါပဲ။ ထုံးကကျြေမြားနဲ့သာမက ကြောကျဖွူသားနဲ့ပါ ထှငျးထုထားတာမြိုးတှလေညျး အမြားအပွား ရှိပါသေးတယျ။
စဖငျ့တှရေဲ့ မကျြနှာဟာ ထှနျးသဈစ ရှငျနမေငျးရဲ့ ဂုဏျသတ်တိတှနေဲ့ ပွညျ့လြှံနကွေောငျး လင်ျကာဆရာမြားက ဖှဲ့နှဲ့ကွလေ့ ရှိပါတယျ။ ခွင်ျသေ့ ဆိုတာက အထူးပွောဖို့ မလိုပါ။ ရဲရငျ့ထကျမွကျခွငျး၊ ပှငျ့လငျးထှနျးတောကျခွငျး လို့ အီဂဈြတှကေ အဓိပ်မါယျ ဖှငျ့ဆိုယူဆခဲ့ပါတယျ။ ခွင်ျသရေဲ့ကိုယျပျေါက တျောဝငျလူသားတယောကျရဲ့ ဦးခေါငျးဟာ တနျခိုးအာဏာ သကျရောကျခွငျး ၊ ခှနျအားကွီးခွငျး၊ ဉာဏျရညျမွငျ့မားခွငျး စတဲ့ စှမျးရညျမြားနဲ့ ပွညျ့ဝသူ ဖာရိုးဘုရငျလို့ ရညျညှနျးထားတာပါ။ ဒါဟာ ရှေးနှဈပေါငျး ၂၀၀၀ ကြျောက အီဂဈြလူမြိုးတို့ရဲ့ Icon ကိုးကှယျမှုပုံစံ တဈမြိုးပါပဲ။ အီဂဈြခတျေဟောငျးနိုငျငံ တဈခုရဲ့ ရောငျပွနျဟပျမှုလညျး ဖွဈပါတယျ ။
အီဂဈြမှာ ပိရမဈမြားနဲ့ ခှဲခွားလို့မရအောငျ တပူးပူး တတှဲတှဲ ဖွဈနတေဲ့ အရာတဈခု ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ စဖငျ့ရုပျထုမြားပဲ ဖွဈပါတယျ။ စဖငျ့သညျ လူ့မကျြနှာပုံ ဖွဈသညျ့အပွငျ ကြောကျတုံးကွီးတဈတုံးပျေါတှငျ ထှငျးထုထားခွငျးမြိုးဖွဈပွီး ပိရမဈမြားနှငျ့လညျး ယှဉျတှဲလကျြ ရှိပါတယျ။ စဖငျ့နဲ့ပတျသကျတဲ့ အထောကျအထားကတော့ ရှားပါးလှပါတယျ။ အီဂဈြဘုရငျမငျးဆကျ ၁၈ ကွိမျမွောကျ မငျးဆကျ နောကျပိုငျးမှသာ စဖငျ့နဲ့ ပတျသကျတဲ့ မှတျတမျးမြား ရှိခွငျး ဖွဈပါတယျ။
အကွီးဆုံးသော စဖငျ့ရုပျထုကွီးမှာ သဲထဲတှငျ နဈမွုပျနရောမှ ပွနျလညျတူးဖျောထားခွငျး ဖွဈပါတယျ။ စဖငျ့တှဟော ပိရမဈမြား၊ ဘုရားကြောငျးအနီးမြားမှာ အစောငျ့အရှောကျအဖွဈ ထားတဲ့သဘောမြိုး ဆောငျနပေါတယျ။ ဂီဇာအရပျမှာရှိတဲ့ စဖငျ့ရုပျတုကွီးဟာ အကွီးဆုံးဖွဈပွီး လေးထပျတိုကျခနျ့ အမွငျ့ရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ဗုဒ်ဓဘာသာ ကြောငျးကနျ ဘုရားမြားမှာ အစောငျ့အရှောကျအဖွဈ ခွင်ျသရေု့ပျမြား ထားသလို စဖငျ့ဆိုတာလညျး အီဂဈြတှရေဲ့ မွငျ့မွတျတဲ့ အဆောကျအဦးမြားအတှကျ အစောငျ့အရှောကျမြား ဖွဈတနျရာပါတယျ။
စဖငျ့ရုပျထုမြားကို နထှေကျရာ အရှဘေ့ကျကို မကျြနှာမူ တညျဆောကျထားကွပါတယျ။ စဖငျ့ဆိုတာ အီဂဈြရဲ့ ဈာနျနတျဘုရားကို ရညျညှနျးပွီး အထှတျအမွတျနရောမြားနဲ့ ဂန်ဓာရီဝိဇ်ဇာ အတတျပညာမြားကို စောငျ့ရှောကျပေးနခွေငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ စဖငျ့တှကေို မူလထှငျးထုစဉျက အခြိုးကနြ လှပပွီး ကကျြသရရှေိသော မကျြနှာမြား ဖွဈကွပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ သဘာဝမုနျတိုငျးမြားနဲ့ လကျဆော့သူတခြို့ကွောငျ့ အခြို့စဖငျ့တှရေဲ့ နှာခေါငျးနှငျ့ မကျြနှာတှေ ပကျြစီးသှားကွရပါတယျ။
စဖငျ့ရဲ့မကျြနှာတှထေဲမှာ ဂီဇာအရပျမှာရှိတဲ့ စဖငျ့ရုပျထုကွီးဟာ အလှနျတညျကွညျ ခံ့ငွားပွီး အရှအေ့ရပျက ပျေါထှနျးလာမယျ့ နဘေုရားကို ပူဇျောနဟေနျ ရှိပါတယျ။ စာရေးဆရာကွီး ပေါလျဘရငျတနျကတော့ ရှေးဟောငျးအီဂဈြလူမြိုးမြားသညျ ရား ချေါ နနေတျဘုရားကို ကိုးကှယျကွရာ စဖငျ့ရုပျထုမြားကို နဘေုရားအား ပူဇျောဖို့ရနျ အရှဘေ့ကျသို့ လှညျ့ထားခွငျးမှာ ပနံသငျ့လှကွောငျး မှတျခကျြခထြားပါတယျ။
အရှနေို့ငျငံမှ ဆငျးသကျလာသော အာရတျတှဟော ကော့ကေးရှပျတောငျတနျး မှတဈဆငျ့ အီဂဈြပွညျကို ဘီစီ ၁၀,၀၀၀ ခနျ့မှာ ဝငျရောကျလာပွီး ဂီဇာအရပျကို ဗဟိုပွု ထီးနနျးစိုကျပါတယျ။ အာရျယာနျနှယျမြား ဝငျလာခွငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ အာရတျတှနေဲ့အတူ အာရျယာနျသာသာနာပွု ဘုနျးတျောကွီးမြားလညျး ပါလာပွီး ဘာသာရေးအယူ တညျထောငျခဲ့ပါတယျ။ ယငျးဘာသာရဲ့အနှဈသာရအရ အရာရာကို ဖနျတီးနိုငျတဲ့ အန်တိမ ဓာတျဘုရားကွီး ရှိပါတယျ။ ထိုဓာတျဘုရားက ဖနျတီးပေးအပျတဲ့ အသကျဓာတျက လောကလူသားမြားအဖွဈ တညျရှိပွီး ရုပျခန်ဓာသဆေုံးပမေယျ့ အသကျဓာတျကတော့ ဆကျလကျကနျြရဈနမှော ဖွဈပါတယျ။
အာရတျဘုရငျမှာ အကွံပေးပုဂ်ဂိုလျ တဈယောကျ ရှိပါတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ မငျးဆရာလညျးဖွဈပွီး အရှအေ့ရပျမှလာတဲ့ အာရျယာနျအနှယျ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဘုရငျကွီး အနီးမှာရှိတဲ့ မှူးမတျပညာရှိမြား အားလုံးထကျ ဉာဏျပညာ ကွီးမားထူးခြှနျသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဘုရငျအာရတျ လကျထကျမှာ စဖငျ့မြားကို စတငျတညျဆောကျခဲ့ခွငျး ဖွဈတာကွောငျ့ စဖငျ့ရုပျထုမကျြနှာသညျ ဘုရငျအာရတျရဲ့ အကွံပေးပုဂ်ဂိုလျကွီးရဲ့ မကျြနှာဖွဈကွောငျး အတတျဟော ဂန်ဓာရီပညာရှငျဖွဈသော အဂ်ဂါကစေီက ဆိုပါတယျ။ မညျသို့ပငျဖွဈပါစေ။ စဖငျ့ရုပျထုတှဆေိုတာ ပိရမဈဘုရားကြောငျးတှကေိုသာမက ဂန်ဓာရီပညာတိုငျကွီးကိုပါ စောငျ့ရှောကျကာ ခှနျအားနှငျ့ စှမျးအငျထူးမြားကို ကိုယျစားပွုနကွေောငျး သုတသေီမြားက လကျခံထားကွပါတယျ။
Previous post ​ဘောလုံးအားကစားရဲ့ မူလအစသမိုင်း
Next post မှတ်သားစရာ စာတိုလေးများ – ၁